Shiinaha COVID-19 / Hargabka A / Dureyga B Soosaarayaasha xirmooyinka xirmooyinka iyo alaab-qeybiyeyaasha. Yinye
Feyrasyada infalawansada (IFV) waa cudurada keena cudurada hargabka. Hargabku waa infakshan daran oo neef mareenka ku dhaca oo uu sababo fayraska A, B, iyo C, kaas oo si aad ah u faafa una faafa. Si dhakhso ah, muddada mudada gaaban, dhacdooyinka sare. Ifilada Fayrasku had iyo jeer wuxuu u muuqdaa qaab faafa, kaasoo sababi kara hargabka adduunka oo dhan faafa. Waxaa si ballaaran loogu qaybiyaa xayawaanka, sidoo kale wuxuu sababi karaa cudurada faafa ee hargabka wuxuuna sababi karaa tiro aad u tiro badan oo xayawaan u dhinta. Fayraska infalawansada B badanaa wuxuu sababa dillaaca maxalliga ah mana keeno cudur caalami ah oo hargab ah. Fayrasyada infalawansada C badanaa waxay u muuqdaan qaab firidhsan, oo inta badan ku dhaca dhallaanka iyo carruurta yaryar, guud ahaanna ma sababaan cudurro faafa. Sidaa darteed, waxay leedahay ahmiyad weyn oo bukaan socod eegis ah oo loogu talagalay ogaanshaha feyraska hargabka A iyo B.
Hore: Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Qalabka Multiplex Real-Time PCR
Xiga: COVID-19 Qalabka baaritaanka Antibody / Antigen